Utah, Hawaii, Idaho, Kentucky, New Mexico: Ny fanjakana tsy matory indrindra any Etazonia
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Utah, Hawaii, Idaho, Kentucky, New Mexico: Ny fanjakana tsy matory indrindra any Etazonia
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • Tourism • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Hawaii no fanjakana faharoa tsy matory indrindra any Etazonia.
Hawaii dia nambara ho fanjakana faharoa "tsy matory indrindra" any Amerika, araka ny filazan'ny Google.
Ny angon-drakitra vaovao dia mahita fa ireo monina ao Utah dia olana amin'ny torimaso Googling mihoatra noho ny fanjakana hafa any Amerika.
Hawaii sy Idaho no fanjakana faharoa sy fahatelo tsy matory indrindra araka ny fikarohana Google.
Hawaii ihany koa no fanjakana nikaroka ny 'Ahoana ny fomba fatoriana' ny vola fahatelo ambony indrindra.
Nanadihady ny fanadihadiana nataon'ireo manam-pahaizana momba ny torimaso Google angon-drakitra momba ny fironana hamoronana tondro mba hametrahana filaharana voafaritra amin'ireo fanjakana izay mahazo torimaso kely indrindra ary mitady fanampiana be indrindra.
Ny teny nodinihina dia nahitana hoe, 'Tsy afaka matory aho', 'Ahoana ny torimaso', 'Ampio ny torimaso' ary 'Matory tsara kokoa'.
Utah Googled olana sy olana momba ny torimaso mihoatra noho ny fanjakana hafa any Amerika, mikaroka olana amin'ny torimaso amin'ny tahan'ny avo kokoa noho ny fanjakana hafa. Ny mponina ao Utah dia nikaroka 'Ahoana ny fomba fatoriana' mihoatra noho ny fanjakana hafa any Etazonia.
Hawaii no fanjakana faharoa tsy mahita tory indrindra any Amerika miaraka amin'ny naoty index 24. Izany dia vokatry ny maha-firenena an'i Hawaii hoe 'Tsy mahita tory aho' ny Google no faharoa be indrindra amin'ireo fanjakana dimampolo. I Hawaii ihany koa no fanjakana nikaroka ny 'Ahoana ny fomba fatoriana' ny sandan'ny fahatelo avo indrindra, ka nampiakatra ny salan'isa tsy misy torimaso Google ho an'ny fanjakana.
Idaho no fanjakana fahatelo tsy matory indrindra any Etazonia araka ny Google fikarohana. Idaho dia nikaroka ny 'Ahoana ny torimaso' amin'ny boky faharoa avo indrindra amin'ny fanjakana rehetra ary mikaroka ihany koa ny 'Tsy mahita tory aho', ny isan'ny fahatelo ambony indrindra amin'ny fanjakana rehetra, izay mandray anjara amin'ny isa tsy ampy torimaso.
New Hampshire dia nitady ny teny hoe 'Tsy afaka matory aho' indrindra amin'ireo fanjakana dimampolo rehetra, saingy nitady ireo teny telo hafa tsy matory kokoa raha ampitahaina, manome ny fanjakana ny isa tsy matory amin'ny ankapobeny amin'ny 84 - mahatonga azy ho faha-17 amin'ny tsy matory be indrindra. fanjakana any Amerika.
Ny mponin'i North Dakota dia nanao Google 'tsara kokoa ny torimaso' noho ny fanjakana hafa na dia hita aza fa iray amin'ireo fanjakana faran'izay kely indrindra tsy mahita tory, laharana faha-41 amin'ny fanjakana tsy matory indrindra miaraka amin'ny isa 138 raha oharina amin'ny 23 ao Utah.
Ny fanjakana tsy matory indrindra any Amerika, araka ny filazan'i Google: